लेबी हटेपछि बचतमा ६० हजार, मलेशियाबाट बढ्ला त रेमिट्यान्स ? - BizKhabar Online
लेबी हटेपछि बचतमा ६० हजार, मलेशियाबाट बढ्ला त रेमिट्यान्स ?
२०७३ पुष २० (January 4, 2017) मा प्रकाशित
काठमाडौं । मलेशियाका गृहमन्त्री अहमद जहिद हमिदीले शनिबार विदेशी कामदारले लेबी तिर्न नपर्ने घोषणा गरेसँगै त्यसले नेपाली कामदारलाई पनि ठूलो राहत मिलेको छ । वार्षिक २ हजार ४ सय ४८ रिङ्गिट अर्थात हालको रिङ्गिट मूल्य अनुसार ६० हजार रुपैयाँ लेबी तिर्दे आएका नेपाली कामदारको सो वापतको रकम वचत हुने भएको छ । लेबी कटौतीसँगै मलेशियामा रहेका नेपाली कामदारले वार्षिक थप ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत गर्ने निश्चित भएको छ ।
मलेशिया इमिग्रेशनको तथ्याङ्क अनुसार २०१५ को डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा ४ लाख ८५ हजार नेपाली कामदार मलेशियामा बैध रुपमा काम गरिहेका छन् । मलेशिया सरकारले विदेशी कामदारलाई बैधानिकता गर्न ल्याएको ‘सिक्स पी’ कार्यक्रम पश्चात बैध कामदारको संख्या ४ लाख ९२ हजार पुगेको थियो । तर, १ वर्षको अवधिमा झण्डै १ लाख नेपाली कामदार मलेशियाको रोजगारीमा पुगिसकेका छन् । सो अवधिमा केही कामदार फर्किएपनि अझै ५ लाख नेपाली कामदार मलेशियाका कानुनी रुपमै कार्यरत छन् ।
यस अघि नेपाली कामदारले मलेशियामा लेबी र पानी बिजुली गरी प्रति महिना २ सय ४ सय ४८ रिङ्गिट बुझाउँदै आएका थिए । गृहमन्त्री हमिदीले सन् २०१७ को शुरुवातसँगै विदेशी कामदारले त्यस्ता खालका कुनै पनि आर्थिक दायित्व तिर्न पर्ने घोषणा गरेपछि कामदारका उक्त रकम बचत हुने भएको हो । यस अघि रोजगारदाताले कामदारसँग लिएर सरकारलाई लेबी तिर्दै आएपनि अबका दिनमा सो सबै दायित्व सम्बन्धित रोजगारदाताकै हुने भएको छ ।
अहिले पनि नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत मुलुकमा मलेशिया नै रहेको छ । हाल मलेशियामा रहेका कामदारको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि लेबी फ्री भएसँगै थप ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्ने निश्चित छ ।
लेबी फ्रीसँगै मलेशिया जाने कामदारको आम्दानी राम्रो हुने नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँन् । ‘यस अघि मलेशिया गएका कामदारले एक वर्षसम्म कमाएको पैसा जाँदा लागेको ऋण तिर्दा ठिक्क हुन्थ्यो,’ खनालले भने, ‘लेबी फ्री हुँदा अहिलेको बजार मूल्य अनुसार जाँदा लाग्ने खर्च यसैले धान्ने छ ।’ लेबी फ्रीसँगै मलेशिया जाने कामदारको चाप समेत बढ्ने उनको तर्क छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा मलेशियाबाट नेपाल भित्र्ने रेमिट्यान्स उच्च रुपमा बढ्नेछ ।
मलेशिया सरकारले विदेशी कामदारको लागि गरेको लेबी फ्रीको घोषणासँगै नेपाल भित्र्ने रेमिट्यान्समा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्ने नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका महासचिव तथा आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल बताउँछन् । ‘लेबी फ्रीको व्यवस्थासँगै मलेशियाको रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘यदि मलेशिया सरकारले यो व्यवस्थालाई तत्काल लागू गराउने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार र नेपाल दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ ।’ तर, गृहमन्त्री हमिदीले घोषणा गरेको सो नीतिलाई मलेशिया सरकारले पारित गर्न भने बाँकी नै छ । अहिले नेपालमा वार्षिक ६ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
झण्डै ७ वर्ष देखि नेपाली कामदार बढी रोजगारीमा जाने देशको सुचिमा रहेको मलेशियामा यस वर्ष भने गिरावट आएको छ । वार्षिक २ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार मलेशियाको रोजगारीमा पुग्ने गरेकोमा यस वर्ष १ लाख पनि पुगेका छैनन् । मलेशिया सरकारको यो निर्णयले मलेशियाको काम गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि ठूलो राहत मिल्ने छ ।
हमिदीले विदेशी कामदार बस्ने होस्टेलको सुविधा समेत रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने तथा विदेशी कामदारको रेखदेख तथा अवस्थाको मूल्यांकन गर्न ‘जिम्मेवारी र अवलोकन’ सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउने बताएका छन् । यसैगरी, कामदारको ‘सेक्युरिटी डिपोजिट’मा पनि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यदि तत्काल यो व्यवस्था लागू भएमा नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकमा पुनः मलेशिया पर्ने छ ।
एनआइसी एशिया र एम एन्ड एम रेमिटबीच सम्झौता, मलेशियाबाट इनवार्ड सेवा
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार, ७ महिनामा भित्रियो ४ खर्ब
नेपालको बाह्य क्षेत्र असन्तुलन, विदेशी विनिमय सञ्चितिको भरमा अर्थतन्त्र
‘सिआईटी युनिट स्किम’ ल्याउँदै लगानी कोष, रेमिट्यान्सलाई पूँजीबजारमा लगानी गरिने
बैधानिक च्यानलबाट पैसा नपठाए बैदेशिक रोजगारीमा जान रोक, अबैधानिक च्यानलबाट आएको पैसा रोकिने
नेप्से परिसुचकलाई रेमिट्यान्सको आड